Xildhibaanno Guddoonka Baarlamaanka u Gudbiyay Mooshin ka dhan ah Prof. Jawaari – Puntland Post
Posted on March 14, 2018 March 14, 2018 by PP-Muqdisho
Xildhibaanno Guddoonka Baarlamaanka u Gudbiyay Mooshin ka dhan ah Prof. Jawaari
Muqdisho (PP) ─ Xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka Soomaliya ayaa saakay moosin k dhan ah guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari u gudbiyay gudoonka golaha.
Diyaarinta Mooshinkan ka dhanka ah Jawaari ayaa maalmahaan Muqdisho ka socday, inkastoo uu si rasmi ah u soo shaac–baxay xalay, markaasoo ay ka socdeen Muqdisho kulamadii ugu dambeeyay ee lagu gudbinayay mooshinka ka dhan ah Jawaari.
Xildhibaanada mooshikan saxiixay ayaa tiradooda lagu sheegay inay 100 ka badan tahay , iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in mooshinkaan ay dabada ka riixayso madaxtooyada Soomaaliya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa lagu eedeeyay in mudadii xilka uu hayay uu ku kacay falal liddi ku ah dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka, waxaana mooshinkan gacanta loo geliyay saakay Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Federaalka.
Ugu dameyn, Mooshinkan ayaa kusoo beegmaya maalmo uun ka hor markii uu furmay Kal-fadhiga saddexaad ee baarlamaanka Somalia, kaasoo horay loo sheegay inay horyaallaan sharciyo fara badan oo la doonayo in inta uu socdo la meel-mariyo.
HADDABA, AKHRISO MOOSHINKA LAGA GUDBIYAY JAWAARI IYO WAXA LAGU EEDEEYAY;